Kordhi Awoodaha Raadinta Barta Gudaha ee 'WordPress' iyadoo la adeegsanayo Raadinta Sare ee Jetpack | Martech Zone
Isniin, November 9, 2020 Isniin, November 9, 2020 Douglas Karr
Dabeecadaha macaamiisha iyo macaamil-raadintu waxay sii wadaan inay isbedelaan sidii ay ahaan jireen is-adeegid oo raadi macluumaadka ay u baahan yihiin adigoon waligaa la xiriirin shirkaddaada. In kasta oo canshuuraha, rootiga, waxyaabaha la xiriira, iyo naqshadeynta ay yihiin waxyaabo muhiim u ah istcimaalka isticmaalaha ee caawiya booqdayaasha raadinta goobta gudaha badanaa waa la iska indhatiraa.
Raadinta Bogga WordPress
In kasta oo WordPress uu lahaa shaqeynta raadinta gudaha tan iyo markii la aasaasay, waxay inta badan ku tiirsan tahay awooda tifaftiraha si loo hagaajiyo cinwaanada, qaybaha, tags, iyo waxyaabaha.
Taasi waxay soo bandhigi kartaa arrimo khibrad leh, in kastoo. Haddii aad wax ka beddesho raadinta gudaha waxaadna lumin kartaa ka qayb qaadashada mawduucaaga. U-hagaaji akhristayaasha waxaadna lumin kartaa saxsanaanta baaritaanka gudaha ee WordPress. Oo hadaad isticmaaleyso Woocommerce, taasi waxay ka dhigan tahay inaad lumineyso iibka.
Dadka ku jira goobaha eCommerce waa 2x aad ayey u badan tahay inay wax iibsadaan markay raadinayaan
Raadinta Jetpack Advanced Site
Shirkadda waalidka ah ee WordPress waxay sii waddaa inay bixiso adeegyo lacag leh iyo waxyaabo lagu daro, iyadoo mid ka mid ah noocyada ugu caansan uu yahay Jetpack. Jetpack waa qalab cajiib ah oo loo adeegsan karo in lagu ilaaliyo nabadgelyada bartaada, la kordhiyo xawaaraha boggaaga, kor loogu qaado awooda boggaaga, laguna soo wargeliyo xirmo falanqeyn adag.
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah astaamaha ugu xiisaha badan, in kastoo, ay tahay Raadinta Jetpack… Ah wanaajin heer sare ah oo ku saabsan awoodaha raadinta WordPress ee ku xoojiya dadka isticmaala mudnaanta dheeraadka ah, miirayaasha, iyo kala soocida raadinta qoraallada, bogagga, alaabada, iyo nooc kasta oo boosteejo kale ah. Astaamaha waxaa ka mid ah:
Natiijooyin aad u khuseeya oo leh algorithms darajo casri ah
Kordhiyay oo mudnaanta la siiyay natiijooyinka ku saleysan istaatistikada boggaaga
Raadin deg deg ah iyo shaandheyn adigoon dib udajin bogga
Raadinta shaandheysan iyo wejiga leh (ee sumadaha, qaybaha, taariikhaha, canshuuraha gaarka ah, iyo noocyada boostada)
Iswaafajinta mawduuca la hagaajiyay ee labada desktop iyo mobilada
Tusmeynta waqtiga-dhabta ah, marka tusmadaada raadinta waxay cusbooneysiin doontaa daqiiqado gudahood marka wax laga beddelo bartaada
Taageerada dhammaan luuqadaha, iyo falanqaynta luuqadeed ee horumarsan ee loogu talagalay 29 luqadood
Shuruudaha raadinta ee la iftiimiyay ee faallooyinka iyo ku dhajinta waxyaabaha ku jira
Sax sixitaanka higaada oo sax ah
Haddii dadku jawaabaha ay rabaan si dhakhso leh u heli karaan iyagoon email ii soo dirin, waa dahab saafi ah oo shaqadayda u fududaynaya Waxaan ku xayaysiinayaa la-tashiga macmiilkeyga waxaanan dadka u sheegayaa inay u adeegsadaan maxaa yeelay runti way shaqaysaa.
Kylie Mawdsley, La Taliyaha Naqshadeynta Gudaha, Kylie M. Gudaha
Martech Zone Raadinta Goobta
Waxaan cusbooneysiiyay raadinta boggayaga Martech Zone in lagu daro Raadinta Jetpack markaa adigu waad arki kartaa sida ugufiican ee khibrada adeegsaduhu u yahay. Isticmaalayaasha waxay wax ka beddeli karaan mudnaanta natiijooyinka iyagoo ku habboon ama da'da boostada. Ama, waxay ku shaandheyn karaan natiijooyinka iyagoo ku saleynaya qeybaha, tags, ama sanadka la daabacay.
Maamulayaashu waxay u habeyn karaan isdhexgalka raadinta gudaha iyo qaabeynta dhowr ikhtiyaar:
Dejinta amarka caadiga ah ee nooc ahaan, ugubka, ama kan ugu da'da weyn.
Awood siinta mawduuc mugdi ah ama fudud.
Furitaanka isugeynta aqbasho marka isticmaaluhu bilaabo qorida ama markay gujinayaan raadinta.
Awood u lahaanshaha ka reebista qoraallada, bogagga, noocyada boostada ee caadiga ah, ama warbaahinta.
Awood u leh inuu ka doorto qaabab kala duwan.
Awood u leh inuu beddelo hufnaanta asalka ee dusha sare.
Awood u leh inuu beddelo midabka muuqaalka leh ee ereyada raadinta ee laga helay natiijooyinka raadinta.
Raadinta Jetpack waa casriyeyn la bixiyay oo si gooni ah loo qiimeyn karo ama lagu dari karo xirmadaada guud ee Jetpack.
U cusbooneysii Raadinta Jetpack
Afeef: Waxaan ku xiran nahay Raadinta Jetpack.
Tags: Jetpackjetpack plugingoobta raadintaWordPressplugin WordPressplugins WordPressbaaritaanka goobta wordpress